Tiketi ICE ụgbọ oloko dị ọnụ ala na ọnụ ahịa njem njem | Save A Train
Tiketi ICE ụgbọ oloko dị ọnụ ala na ọnụ ahịa njem njem
Home > Tiketi ICE ụgbọ oloko dị ọnụ ala na ọnụ ahịa njem njem
Lee ị nwere ike ịchọta ozi niile gbasara nke Germany Tiketi ụgbọ elu ICE dị ọnụ ala na ICE njem ahịa na uru.
isiokwu: 1. ICE site na Train Highlights
2. Banyere ICE Train 3. Nleta kachasị iji nweta tiketi ụgbọ elu ICE dị ọnụ ala
4. Ego ole ka tiketi ICE na-eri 5. Rozọ Njem: Gịnị mere o ji dị mma twere ụgbọ oloko ICE, gharakwa njem ụgbọelu
6. Kedu ihe dị iche na klaasị ọkọlọtọ na klaasị mbụ na ice 7. Enwere ndenye aha ICE
8. Ogologo oge tupu ọpụpụ nke ụgbọ oloko ice iji rute 9. Kedu ihe bụ usoro ụgbọ oloko nke ICE
10. Kedu ụlọ ọrụ ndị ICE na-efe 11. Ice insgbọ oloko FAQ
ICE site na Train Highlights
Gbọ okporo ígwè kachasị ọsọ na Germany bụ ụgbọ oloko ice na ọsọ nke 300km / hr.
Tọ flagship ICE ụgbọ oloko nke German ụgbọ okporo ígwè usoro na-ejikọ obodo ọ bụla n'ime Germany.
N'ime ụgbọ oloko niile na-agba ọsọ na Usoro ụgbọ okporo ígwè German, ICE so na udi A.
Ezubere ụgbọ oloko ice iji zoo ụgbọ elu na nkasi obi na oge ị ga-aga.
Rozọ mba ofesi nke ICE gụnyere France, Belgium, Denmark, Austria, mba netherland, na Switzerland.
Banyere ICE Train
Intercity-Express ma ọ bụ na ya shortcut aha ICE bụ usoro nke elu-ọsọ ụgbọ oloko nke ndi Deutsche Bahn nwere, Ndị na-enye ụgbọ okporo ígwè mba Germany. The ICE ụgbọ oloko are known for luxury, ọsọ, na nkasi obi ka ha na - ejikọ obodo niile na Germany.
Na gbapụrụ ọsọ dị ka 300km kwa awa, njem ụgbọ oloko nke ICE bụ ụzọ kachasị ọsọ iji gafere n'etiti obodo ndị dị anya dịka Cologne na Hamburg.
CEzọ Njem ICE amachaghị na Germany. Gbọ oloko a na-aga n’uzọ mba ụwa gawa Austria, France, Belgium, Switzerland, Denmark, na Netherlands.
gaa Chekwaa Homepage Train ma ọ bụ jiri wijetị a chọọ ụgbọ oloko tiketi maka Ice insgbọ oloko
Nleta kachasị iji nweta tiketi ụgbọ elu ICE dị ọnụ ala
Number 1: Detuo tiketi ICE gị tupu oge ị nwere ike
Ọ bụrụ na ị ga-achọ inweta Tiketi ICE dị ọnụ ala, nke mbụ ị zụrụ ha, ọ ga - eme ka i nwekwuo ohere ịnweta ha ọnụ ala. Enwere 3 ụdị ọnụ ala ICE dị ọnụ ala na ụdị tiketi atọ niile dị na oge ere ere mbụ, mana nchekwa ego ụgbọ, Nzọpụta ego, na Super sparpreis nwere ike ọgaghị adị ka ụbọchị ọpụpụ na-abịarukwu nso. Nwere ike idowe tiketi ụgbọ elu echekwara n'oge 6 ọnwa tupu ọpụpụ.
Number 2: Tụ gị ICE ụgbọ okporo ígwè tiketi mgbe ị bụ ụfọdụ nke gị njegasi
Ijide n'aka na njem gị na ụbọchị ọpụpụ ga-azọpụta gị ego na nkwụghachi ụgwọ. Ọnụego nke nkwụghachi na nhọrọ maka ịlaghachi tiketi ICE anaghị eji ọzọ dabere n'ụdị tiketi ị zụrụ. Ọzọkwa, nkwụghachi ụgwọ dị ala maka tiketi nchekwa ego karịa maka tiketi ụgbọ ala ọkọlọtọ. Mara na DB agaghị akwụghachi gị ego mgbe ị laghachiri tiketi gị. A na-akwụghachi nkwụghachi DB site na akwụkwọ ego DB, nke ị nwere ike iji kwụọ ụgwọ maka ọrụ ọ bụla ha na-enye. I nwekwara ike ree gi ICE ụgbọ oloko tiketi online on internet forums if you wish to get the money back.
Number 3: Njem site na ICE ụgbọ oloko n'oge oge kachasị elu
Tiketi ICE dị ọnụ ala karịa n'oge oge kachasị elu (Tuzdee, Wenezde anwụ Wenezde, Wenezdee, na Satọde). N'oge elu ụbọchị, ọnụ ala tiketi na-ere ngwa ngwa, na-ahapụ naanị tiketi Flexpreis. Travelga njem na ụbọchị Peak, were akwụkwọ iji nweta tiketi ụgbọ elu. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta tiketi ụgbọ elu saver, ijide n'aka na ị ga-eme njem n’isi ụtụtụ na n’isi ehihie (n'ihi ndi njem njem) dị ka Flexpreis tiketi ga-adị ọnụ ala karịa mgbe ahụ. Egbu, zere njem ọhaneze and school holidays ka ọnụ ahịa tiketi ICE ga-abawanye.
Number 4: Zụta tiketi gị nke ICE na Save A Train
Ga-ahụ onyinye kacha mma nke ICE gbaa ụgbọ oloko na Europe na weebụsaịtị anyị, Save A Train. Anyị nwere onyinye kachasị ukwuu nke tiketi ụgbọ elu na Europe na ụwa. Na njikọ anyị na ọtụtụ ndị na-arụ ụgbọ okporo ígwè na algọridim ziri ezi, anyị na-enye gị tiketi ICE kacha ọnụ ala ị nwere ike ịchọta. Ọzọkwa, anyị na-ahụ ụzọ ọzọ dị ọnụ ala maka ụgbọ oloko na-abụghị ICE.
Ego ole ka tiketi ICE na-eri?
Pricegwọ nke tiketi ICE na-adabere n'ụdị tiketi na klas nke oche ịchọrọ. n'ozuzu, German ụgbọ okporo ígwè is famous for its low ICE ticket prices. E nwere ụdị tiketi atọ maka ụgbọ oloko ice - ọkọlọtọ ma ọ bụ tiketi Flexpreis, ụgbọ elu Supersaver ma ọ bụ Supersparpreis, na ego nchekwa ego ma ọ bụ tiketi Sparpreis ICE. Tiketi ego ụgbọ a na-echekwa dị ọnụ ala karịa tiketi ọkọlọtọ, mana tiketi dịnụ belata ka ụbọchị ọpụpụ na-abịaru nso. ICE tiketi dabere na klaasị ị họọrọ na ebe a bụ okpokoro nchịkọta nke ọnụahịa nkezi maka klaasị ọ bụla:
Ọkọlọtọ 17 € – 50 € 30 € – 120 €
Ebere 21 € – 70 € 58 € – 152 €
Rozọ Njem: Gịnị mere o ji dị mma iji ụgbọ oloko ice, gharakwa njem ụgbọelu?
1) Zere Usoro Mbido. Ọ bụrụ na ịnwere ụgbọ elu site 9 m, ị ka mma ịnọ ọdụ ụgbọ elu opekata mpe site na 7 n'ihi oge ị ga-agarịrị Usoro Nbanye na nyocha nchekwa, ọ fọla obere ka ị banye ụgbọelu.
Na ụgbọ oloko ICE, inwere ike ịbịa oge ọ bụla tupu ọpụpụ ọ bụrụhaala na ị na-abanye ụgbọ oloko ahụ tupu ịkwaga. Nke a ga - ekwe omume n ’ihi na enweghị usoro Ibanye tupu ibanye ma ọ bụ chekwaa nche ogologo oge. Naanị gosi na ọdụ ọdụ, chọta ụgbọ oloko gị na egosi, na osisi!
Na ngụkọta oge njem, ICE meriri ụgbọ elu na Germany dịka ọ na-eritekwa na ọnụahịa ya. Na-echekwa oge site na usoro Mbido, ụgbọelu ida ọzọ n'ozuzu njem oge na njem (si n’ọdụ ụgbọ elu ruo ebe a kapịrị ọnụ).
2) Gwọ akpa. Can nwere ike ijide n’aka na ị ga-akwụkwu ndị ọzọ n’akpa uwe ma ọ bụrụ n’ịga ụgbọelu. Otú ọ dị, Ọ bụrụ na ị na-eme njem site na CEgbọ oloko ICE na-akwụ ụgwọ ụgwọ akpa bụ ụgwọ mmefu ị gaghị eme ma ọ bụrụ na ịzụta ọnụ ala ICE ụgbọ okporo ígwè. Iji dokwuo anya, na ọnụ ala ICE dị ọnụ ala, won gaghị akwụ ụgwọ maka akpa ọ bụla nke gị na ya so. Nke ahụ na-eme ka ICE bụrụ nhọrọ njem dị ọnụ ala ma ka mma.
3) Insgbọ oloko na-eme ka gburugburu ebe obibi. The ICE ụgbọ oloko dịkwa nwekwuo gburugburu ebe obibi karịa ụgbọ elu, nke na - akpata mmetọ ikuku. Ejegharị n'ụgbọ okporo ígwè bụ 20 carbon obere ikuku carbon emission karịa njem site na ikuku.
Bremen na Hamburg Ụgbọ oloko
Hanover na Hamburg Ụgbọ oloko
Cologne na Hamburg Ụgbọ oloko
Kedu ihe dị iche na klaasị ọkọlọtọ na klaasị mbụ na ice?
N’adịghị ka ụgbọ oloko ndị ọzọ nwere tiketi maka ngalaba dị iche iche (ọkọlọtọ, azụmahịa, onye isi, wdg) dị ka na Trenitalia, ICE nke Germany dịtụ iche. Enwere klaasị abụọ n'ụgbọ ICE ọ bụla - klas nke mbụ na klas nke abụọ. Isi ọdịiche dị n'etiti abụọ a bụ ọnụahịa, ike mgbanwe, na ọrụ enyere.
Dị ka ọ na-echebara tiketi na ngalaba klas dị na ụgbọ oloko ụgbọ mmiri, ụdị tiketi ọ bụla nwere ike ịdị na klaasị mbụ. This means that even the ọnụ ala ICE ụgbọ okporo ígwè, ọnụ ahịa nchekwa, na Super sparpreis nwere ike ị nweta oche oche mbụ. Otú ọ dị, ọnụahịa ahụ dịgasị iche maka klaasị abụọ a, dika ahuru n’elu.
Tiketi nke mbụ ICE Tiketi:
ICE klas nke mbụ na-esetịpụ ụkpụrụ maka okomoko, nkasi obi, na ọrụ kachasị mma na usoro ụgbọ okporo ígwè Germany. Ezubere maka ụgbọ elu ndị iro, Tragbọ oloko ICE na-enye nkasi obi maka njem ogologo oge. Ọzọkwa, ngalaba nke izizi mejupụtara ihe dịka otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ụgbọ oloko ahụ ma ọ nwere ike ịbụ iberibe atọ dabere na ụgbọ oloko ICE.
Oche oche klaasị mbụ buru ibu ma hazie ya iche na a 2-1 nhazi kama a 2-2 na klas nke abụọ. Nke a na - ewepụtakwu ohere maka ndị njem. Ọzọkwa, Oche ndị ọzọ dị na klas mbụ nke ICE na-ekpuchikwa akpụkpọ anụ faux ma buru ibu karịa ndị nke abụọ. Dịka ndị ọchụnta ego na-ejikarị klaasị mbụ, enwere tebụl siri ike maka ndị njem chọrọ ịrụ ọrụ mgbe ha na-aga.
Ọrụ ndị ọzọ dị iche na klas nke mbụ na klas nke abụọ na ụgbọ oloko ICE gụnyere n'efu, akwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị, free na-akparaghị ókè WI-FI, na ihe pụrụ iche iji gbochie nkwụsịtụ n'ikuku ekwentị. Ndị njem Klas mbụ nwekwara ike ịtụ nri ha site na oche ha ma ọ bụrụ na ha achọghị ịga ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ n'ụgbọ okporo ígwè ahụ.
Ọzọ perk nanị ICE njem nke mbụ na klas bụ oche ndoputa. Tiketi niile maka klaasị mbụ, gụnyere Tiketi ICE dị ọnụ ala, nwee uru a. Ikwesighi ichegbu onwe gi banyere enweghi uzo inweta oghere windo; can nwere ike ịhọrọ oche ịchọrọ ka ị na-edobe akwụkwọ ma debe ya.
Offenburg na Freiburg Zụọ Ahịa
Stuttgart na Freiburg Zụọ Ahịa
Leipzig na Freiburg Zụọ Ahịa
Nuremberg ka Freiburg Zụọ Ahịa
Tiketi nke abụọ ICE:
Ngalaba klas nke abụọ adịghị anya site na klas nke mbụ na nkasi obi. Na mgbakwunye, oche ndị dị na klas nke abụọ dị mma karịa oche ọdụ ụgbọelu. Plus, ha bụ ergonomic, bia na headrest, kpuchie ya na akwa eji. Nke a na-eme njem dị anya nke ọma.
E nwere ọtụtụ klas nke abụọ kwa ụgbọ ICE karịa ndị klaasị mbụ. karịsịa, ndokwa oche nke abụọ bụ nke siri ike karịa nke ngalaba nke klas mbụ. Enwere oche anọ n’usoro ọ bụla (2-2 ndokwa oche), ya na oche abụọ n’agbanyere aka n’etiti.
Ọzọkwa, ndị njem nọ na klas nke abụọ nwere ike ịnweta ụfọdụ ọrụ na klaasị mbụ mana yana oke. Were WI-FI dịka ọmụmaatụ. Na klas nke abụọ, Wi-Fi abụghị ihe akparaghị ókè dịka ọ dị maka ndị njem na klas nke mbụ. Ndị njem klas nke abụọ anaghị enwe ohere ịnweta akwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị n'efu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta akwụkwọ akụkọ na klas nke abụọ, to ga-azụta otu.
Ndị njem nke abụọ nke abụọ ga-aga ụlọ oriri na ọ restaurantụ ifụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịtụ nri. Ha enweghị ike ịtụ ahịa site n'oche ha dịka ọ dị na mpaghara klas mbụ nke ICE. Ọzọkwa, ICE tiketi nke abụọ na Flexpreis na ego nchekwa anaghị ekpuchi nchekwa oche. Ọ bụrụ na ịchọrọ idobe oche na klas nke abụọ, ’kwesiri ịkwụghachi nchikota nke € 6. N'otu aka ahụ ma ndị njem klas mbụ na ndị njem nke abụọ nwere akara eletrik na oche ọ bụla.
Enwere ndenye aha nke ICEtion?
ICE offers rail passes at cheap ICE Train prices maka njem akparaghị ókè na Germany ma ọ bụ Europe. Enwere ụzọ ụzọ ụgbọ oloko atọ:
Ragbọ okporo ígwè German
Passgbọ okporo ígwè German bụ maka njem a na-akparaghị ókè n'ime Germany. Ọzọkwa, ọ bụ maka ndị njem na-adịghị ebi na Europe, toro toro, na Russia. A ole na ole uru nke German Rail Pass gụnyere:
Ndi jidere nke uzo ugboigwe nwere ike iga eleta ha ufodi ebe ha no na Germany (Salzburg, Venice, na Brussels)
Ego ICE ụgbọ okporo ígwè tiketi maka onye ọ bụla n'okpuru 28 afọ
Njem Unlimited na Germany dum
Mmadụ abụọ nwere ike ịchekwa ego karịa site na iji Ejima Abụọ mgbe ha na-eme njem
Ike mgbanwe na-enye ndị na-ejide ụgbọ okporo ígwè German ịga ebe ọ bụla n'oge ọ bụla
Ndị na-ejide ụzọ German nwere ike ịhọrọ site na 3 ka 15 ubochi njem nke oma n’ime otu onwa mgbe i na-az u pass.
Ife Eurail na-enye ohere na-abụghị ndị Europe bi na mpụga Russia, Europe, na Turkey ga-eme njem na-akparaghị ókè na Europe. Fọdụ uru gụnyere:
Uche nta na ego maka njem nleta.
Otu dị iche iche ịhọrọ --- Okenye, Agadi, na Ntorobịa.
Enweghị njedebe njem site na 31 mba Europe, gụnyere Turkey.
Ntinye InterRail na-enye ndị bi na Russia ikike, toro toro, ma ọ bụ njem Europe na-akparaghị ókè na Europe. Perks nke nga a gụnyere:
Discounts on ICE ụgbọ oloko tiketi maka ma nwata ma okenye.
Enweghi njem gaa 33 mba dị na Europe
Traingbọ oloko na-akwụghị ụgwọ maka ndị ejiri ya gafere ihe ruru ụmụaka abụọ nọ n'okpuru 11 afọ.
Oge njem maka 3 ụbọchị ka 3 ọnwa ọ bụla.
Onweere nke ọ bụla dị ma kwesiri ịgbalite ya n'ime 11 ọnwa ịzụta.
Ogologo oge tupu ọpụpụ nke ụgbọ oloko ice iji rute?
Iji hụ na ị rutere n’oge ịbanye, dajụọ, and even na-achọgharị ụlọ ahịa, dụrụ gị ọdụ ka ịbịarịa opekata mpe 30 nkeji oge tupu ọpụpụ gị.
Kedu ihe bụ usoro ụgbọ oloko nke ICE?
Anaghị edozi usoro ụgbọ oloko ahụ, nke a na - eme ka o sie ike ịza. Otú ọ dị, ị nwere ike ịnweta ice ụgbọ okporo oge na ezigbo oge na Save A Train homepage. Tinye mbido gị na ebe ị na-aga ma nweta ohere niile usoro ọzụzụ ụgbọ oloko ICE. CEgbọ ụgbọ mmiri mbụ ICE na-ahapụ site na 6 m, na ụgbọ oloko na-ahapụ onye ọ bụla 30 minit gaa ebe ndi ozo.
Kedu ụlọ ọrụ ndị ICE na-efe?
ICE mba uwa gasị pụọ ọtụtụ mba ụgbọ, ụfọdụ n’ime ha bụ Brussels Midi Zuid (Brussels Midi South Station na Bekee), Arnhem Central, na Amsterdam Central, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Maka ọbịbịa, ICE ụgbọ oloko rute 11 Germanlọ ndị German na otu Switzerland. Ọzọkwa, isi ebe mbata gụnyere Oberhausen, Duisburg, Düsseldorf, Cologne, Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt (Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt), Manheim, Siegburg, na ndị ọzọ.
Ọzọkwa, Dusseldorf bụ obodo mara mma nke dị na Rhine yana akụkọ ọdịnala na ọgaranya. E nwere ọtụtụ ọwọrọiso omenala na akụkọ ihe mere eme na-adọrọ mmasị ka a hụrụ na sinik ụzọ gasị maka ijegharị na nnukwu ụlọ ahịa. Ọ bụ ọnọdụ zuru oke maka ngwụcha izu ụka na ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ.
Site na Amsterdam Central (Centraal dị na Dutch ma ọ pụtara Central Station), ị nwere ike ịbata na Frankfurt, obodo a maara dị ka isi obodo ego Europe. Ihe bụ ihe ọzọ, enwere osimiri mara mma, ngosi ihe mgbe ochie, na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ toụ ileta.
Cologne bụ ebe nka, ije, na ọgaranya akụkọ ihe mere. Na ụgbọ oloko ice sitere Amsterdam Centraal, ị nwere ike ịbanye na Cologne iji mee onwe gị ka ọ maa mma na mma bụ obodo a.
N'ezie, e nwere ọtụtụ botanic ubi, ụlọ oriri na ọ withụ withụ nwere ọtụtụ ụdị culinary masterpieces, zoos, ngosi ihe mgbe ochie, na ndị ọsụsụ na-enwe obi ụtọ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ijighị n'aka na ị ga-ahọrọ, algọridim anyị ga - enyere gị aka ịhọrọ.
Ice insgbọ oloko FAQ
Kedụ ihe m ga-ebudata m na ice?
Ewezuga onwe gị? Bute akwụkwọ njem gị, paspọtụ dị irè, na mkpuchi njem abụghị iwu mana akwụkwọ a dị mma maka ahụike gị.
Kedu ụlọ ọrụ nwere ice?
Mmekọrịta-Express (ice) ọ bụ ndị na-eweta ụgbọ oloko ala nke Germany, ndị Deutsche Bahn, na DB bu nke ndi Federal Government.
Ebee ka m nwere ike iso Ice?
Ice bụ isi na-aga obodo niile dị na Germany. Enwere ụfọdụ mba ICE travel routes mba ụfọdụ nke jikọtara Germany.
Gịnị bụ usoro nnabata maka ụgbọ oloko ICE?
Enweghị usoro nnabata ọ bụla. Mgbe i rutere n’ọdụ ọdụ ụgbọ ala, lelee bọọdụ egosi iji chọta ụgbọ oloko gị. Ọzọkwa, inwere ike iburu ụgbọ oloko oge obula tupu eme ya.
Kedu ọrụ ndị dị na ụgbọ oloko ICE?
Ice ice awade n'ụzọ na-eri ebe menu nwere nri, ọkụ ọkụ, na ụdị mmanya ọ bụla. Ọzọkwa, enwere ọdụ ụgbọ mmiri na-esote oche ọ bụla, free WiFi (akparaghị ókè na klaasị mbụ), na amplifiers maka nnabata ekwentị (naanị maka klaasị mbụ).
Achọrọkarị ICE Ajụjụ – Ekwesịrị m itinye akwụkwọ oche tupu ICE?
Havekwesighi itinye akwụkwọ tupu oge eruo, mana inwere ike idobe oche ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Ọ bụrụ na ịzụta tiketi klaasị mbụ, i tozuru etozu n’enweghi oche.
Enwere WiFi ịntanetị n'ime ice?
Ee, enwere. Na klas nke abụọ, WI-FI internet bụ n'efu mana ọnweghị njedebe dịka ọ dị na Klaasị Mbụ.
N'ikpeazụ, Ọ bụrụ na ị ruru ebe a, ị maara ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụgbọ oloko nke ICE ma dịrị njikere ịzụta tiketi ụgbọ elu ICE gị SaveATrain.com.
You choro itinye peeji a na saiti gi? Pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/train-ice/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro), Ma ọ bụ ị nwere ike ị jikọtara ọnụ ugbu a na ibe a.